ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုထက် ပိုပါသည်။ ~ HCF
Home » ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် » ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုထက် ပိုပါသည်။
( သင်ခန်းစာ - ၁၁ )
သင့်ကိုသင် ဆန်းစစ်ပါ။ အောက်ပါစာကြောင်းများအား မှန်/မှား ဖြေပါ။ ပြီးနောက် ဤသင်ခန်းစာ အား ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် သင်၏အဖြေကို အမှန် တိုက်ကြည့်ပါ။
မှန်/မှား ၁။ မိန်းကလေးဖြစ်သူက ယောက်ျားလေးဖြစ်သူအတွက် သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ညနေခင်းလေး တစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ဖန်တီးပေးရမည်။
မှန်/မှား ၂။ လွန်လွန်ကဲကဲလုပ်ရန်ဆန္ဒမရှိပါက ပွတ်သတ်နမ်းရှုပ်ခြင်းဟာ OK ပါသည်။
မှန်/မှား ၃။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမည့်အချိန်မှာ ပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာသောအချိန်တွင်သာဖြစ်သည်။
မှန်/မှား ၄။ ခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော်သက်များသည် အခြားဆယ်ကျော်သက်များကဲ့သို့ စုံစမ်းသွေးဆောင် ခြင်းများကို ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မှန်/မှား ၅။ ““မြင်မြင်ချင်းအချစ်”” သည် များသောအားဖြင့် စစ်မှန်သောအချစ်ဖြစ်သည်။
မှန်/မှား ၆။ သင်သည် တစုံတဦးအပေါ်တွင် ပြင်းပြသောခံစားချက်များရှိပါက၊ ထိုခံစားချက်များသည် ထိုသူအပေါ် တွင် အစဉ် ရှိနေမည်။
မှန်/မှား ၇။ ယောက်ျားတဦးကို YES ဟု ပြောပြီး သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန် သဘောတူပါက၊ သူသည်သင့်ကို သာ၍ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလာလိမ့်မည်။
မှန်/မှား ၈။ သင်သည်တစုံတဦးနှင့် အပြန်အလှန်ချစ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမျိုးကို တည်ဆောက် ထားပါက၊ ထိုသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ OK ပါသည်။
မှန်/မှား ၉။ သာယာပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ရေးဘ၀အတွက် လိင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံနိုင်ရန် တခု တည်း ကိုသာ လိုအပ်သည်။
မှန်/မှား ၁၀။ အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်းနှင့် စစ်မှန်သောအချစ်နှစ်ခုကို လွယ်ကူစွာ ပိုင်းခြားသိနိုင်ပါသည်။
၁။ မိန်းကလေးဖြစ်သူက ယောက်ျားလေးဖြစ်သူအတွက် သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ညနေခင်း တခုကို မဖြစ်မနေ ဖန်တီးပေးရမည်။
အဖြေ - မှားသည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးသည် အချိန်ကိုအတူကုန်ဆုံးစေခြင်း၌ ၀မ်းမြောက်နိုင်ရန်အတွက် ဒိတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားလေးက ဒိတ်လုပ်ရာမှ ကျသင့်သောကုန်ကျစရိတ်ကို ရှင်းရန်အတွက် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ လိုအပ်သော်လည်း၊ ဤအချက်က သူ့အားအခွင့်ထူးများကိုမပေးပါ။ ကောင်းမလေးတဦး အတွက် ဒေါ်လာ အနည်းငယ် သုံးပြီးနောက်၊ တစ်ညနေခင်းလုံး ထိုဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသော တန်ဖိုးကို ကောင်းမလေးဆီမှပြန်လည် ““ရယူရန်”” ကြိုးပမ်းနေသော မည်သည့်ယောက်ျားမဆိုသည် ““အကြံသမား””သာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကောင်မလေးသည် ကောင်လေးနှင့် အတူကုန်ဆုံးစေခဲ့သော ညနေခင်း၌ ၀မ်းမြောက်ပြီး သူမ၏ကျေးဇူးတင်မှုကို ဖော်ပြလိုပါက ဤသို့ ရိုးရှင်းစွာပြောနိုင်ပါသည်။ ““ကျေးဇူးပါပဲ၊ ကျွန်မအရမ်းပျော်ခဲ့ပါတယ်””။
၂။ လွန်လွန်ကဲကဲလုပ်ရန် ဆန္ဒမရှိပါက ပွတ်သပ်နမ်းရှုပ်ခြင်းဟာ OK ပါသည်။
အဖြေ - မှားသည်
ပွတ်သပ်နမ်းရှုပ်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကြီးသည် အကြောင်းမှာ ဤသို့လုပ်ခြင်းဟာ သင့်ကို လိင်ပိုင်း အရ များစွာလှုံဆော်နိုင်ပြီး သင်လုပ်ရန်မရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေကို လုပ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ာမေငကြညေေ (မူးယစ်ဆေးတမျိုး)ကဲ့သို့ပင် ဤသို့လုပ်ခြင်းဟာ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့အရာတွေကို လုပ်မိစေ ပါတယ်။
၃။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမည်အချိန်မှာ ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာသောအချိန်တွင်သာဖြစ်သည်။
ယောက်ျားနှင့် မိန်းကလေးများသည် သူတို့၏စံနှုန်းများကို အစကတည်းက ကြိုတင်သတ်မှတ် ထားသင့်ပြီး စံနှုန်းများအား မစွန့်လွှတ်မိရန် ကြိုးပမ်းသင့်သည်။ အခြားလူများလုပ်နေသော အရာများ ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ပြောထားသောအရာများကို နားထောင်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏ စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ သင်နှင့် လက်ထပ်မည်သူအတွက် သင့်ကိုသင် သန့်ရှင်းအောင်ထား မည်ဟု အစကတည်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသင့်သည်။
၄။ ခရစ်ယာန်လူငယ်များသည် အခြားလူငယ်များကဲ့သို စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အခြားသူများရင်ဆိုင်ရသော သွေးဆောင်ခြင်းများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဟု ခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော် သက်များက ထင်ထားကြသည်။ သို့သော် အခြားသူများကဲ့သို့ပင် သူတို့တွင် ပြင်းပြသော လိင်ဆန္ဒရှိပါသည်။ အခြားသူများ ရင်ဆိုင်ရသော စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းများကို သူတို့လည်း ခံရမည်ဖြစ်ပြီး အပြစ်၏ သွေးဆောင်ရာနောက်သို့လိုက်ပါက အပြစ်၏အကျိုးဆက်များကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတဦးက လူငယ်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတဦးထံသို့ ဤသို့ရေးခဲ့သည်။ ““ကျွန်မတို့ရဲ့ အသင်းတော်လူငယ် group တစ်ခုမှာ ကျွန်မဟာ ဆပ်ကပ်အပ်နှံမှုရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်မိန်းက လေးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ၊ သွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်ခဲ့တာကြောင့်၊ ကျွန်မဘ၀တစ်ခုလုံးဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ““ကျွန်မဟာ အတွေ့အကြုံဆိုးကို သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။.... ဤပြဿနာမျိုးရှိတဲ့ အခြားလူငယ်တွေအတွက် ကျွန်မရဲ့ အဖြစ်အပျက်က အထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်အပတ် ကျရင်၊ လက်မထပ်ထားတဲ့ မိခင်များ နေထိုင်ရာအဆောင်ကို ပြောင်းမှာဖြစ်ပြီး ကြီးပြင်လာအောင် ကျွန်မ မစောင့် ရှောက်နိုင်တဲ့ ရင်သွေးလေးတဦးကို ကျွန်မ မွေးဖွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာ မိနစ် အနည်းငယ်သာကြာတဲ့ ခန္ဓာပိုင်းအရ ““အချစ်””မှ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့အရာတွေဆိုတာကို အစောကြီး ကတည်းက သိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မ ထိုအရာကိုလုပ်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခရစ်ယာန်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ နေရာဒေသစုံမှ ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းကို “သင်၏အပျိုစင် ဘ၀ ကို ထိန်းသိမ်းပါ”ဟု ပြောလိုပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရခြင်းဟာ ထောင်ထဲမှာနေ နေရသလိုပါပဲ။ သင့် အနီးအနား ရှိ အခြားသူများကဲ့သို့ ဒိတ်လုပ်ဖို့မလွတ်လပ်တော့သလို၊ ပျော်လဲပျော်နိုင် တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုသင်နဲ့ သင့်မိဘတွေ အပေါ် ကျရောက်စေခဲ့တဲ့ အန္တရာယ်ကို သင်မြင်တွေ့ လာပါက၊ ညစဉ်ညတိုင်း သင်ငိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနောက် ကျွန်မဟာ ဆေးပေးခန်းသို့သွားတဲ့အချိန်မှာ ““အဆောင်””မှာ နေ,နေတဲ့ ကောင်မလေး တွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုတွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စပြီးသွားရင် ကျွန်မ ကောလိပ် တက်လိုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လက်ထပ်လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေး လေးကိုတော့ ကျွန်မ မေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့ကိစ္စဟာ ယောက်ျားလေးကိုလည်း ထိခိုက်မှုရှိပါသလား? သူနာကျင်နေတာကို ကျွန်မတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တပတ်မှာတစ်ညသာ အပြင် ထွက်နိုင်ပြီး ကျွန်မရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုလည်း သူကပေးရပါတယ်။ ဤသို့ပေးရခြင်းဟာ သူ့အပေါ်နဲ့ သူ့မိဘတွေအပေါ်မှာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်သူ့ အတွက်မှ ဒီကိစ္စဟာ မကောင်းပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေခြင်းဟာ ၆ လမှ ၁ နှစ်အထိ ကြာနိုင်ပြီး သင်ဟာ သင့်ရဲ့အခန်းထောင့်လေးမှာ သင့်ဘ၀ကို ဆန်းစစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ထိုအရာကို မလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲဟု ကြိမ်ဖန်များစွာ ရေရွတ်နေမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ထိုအရာကို လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ယခုအကျိုးဆက်တွေကို ရင် ဆိုင်နေရပါပြီ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်အတွင်းမှာ သန္ဓေသားလောင်းလေးဟာ ၉ လကြာ ကြီးထွားနေပြီး သူမွေးဖွား လာတဲ့အခါ သူ့ကို အခြားတဦးကို ပေးလိုက် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သင်ဟာ သူ့ကို မစောင့်ရှောက်နိုင်လို့ပါဘဲ။ ဒီကိစ္စဟာ ခရစ်ယာန် ဆယ်ကျော်သက် များ၌လည်း ဖြစ်နိုင်ပြီး သင်က စိတ်မ ကောင်းပါဘူးဟု ပြောရုံနဲ့ ဘုရားသခင်က သင့်ရဲ့ကလေးကို သင့်အထဲကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က သင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတာတောင်မှ၊ ဒီကိစ္စဟာ သင်ရင်ဆိုင်ရပြီး အဖိုးအခကို ပေးရ မည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ အထိန်းအချုပ် မမဲ့စဉ်မှာ သွေးဆောင်မှုကို အချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ရန်အ တွက် ကျွန်မရဲ့ ဒီစာက အခြားခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အကူအညီပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ““ဒီအရာဟာ ငါ့မှာ မဖြစ် နိုင်ပါဘူး”” ပြောတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေထဲမှာ ကျွန်မဟာတဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ဒီပြသနာမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ ဆယ်ကျော် သက် တွေကိုလည်း ကျွန်မဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ဘ၀ ကို နေရာမှန်ပြန်ရောက်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
၅။ “မြင်မြင်ချင်းအချစ်” သည် များသောအားဖြင့် စစ်မှန်သောအချစ်ဖြစ်သည်။
သင်သည် လူတဦးကို မြင်မြင်ချင်းမချစ်နိုင်လောက်ပါ။ သင်သည် မြင်မြင်ချင်းတစုံတဦးကို မည်သို့ သိကျွမ်း နိုင်မည်နည်း? သင်သည်တစုံတဦးကို မြင်မြင်ချင်းစွဲမက်သွားချင်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏ ရင်ခုန်သံအနည်းငယ် စည်းချက် မှားသွားနိုင်သော်လည်း၊ ဤအရာဟာ အချစ်စစ်မဟုတ်ပါ။ အချစ်နှင့်ပတ် သက်၍ မှားယွင်းသောအယူအဆများသည် လူကြိုက်များသော သီချင်းများမှလာသည်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်က ““မနေ့ညက ငါ့စိတ်ထဲမှာ မင်းနဲ့အတူတူ အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အတွက်၊ ယနေ့အချစ်နဲ့အတူ နိုးထလာပါတယ်””။ ဟု ဆိုသည်။ အခြားတစ်ပုဒ် ““ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ငါမသိဘူး။ ဒါကြောင့် “မင်းကိုချစ်တယ်” လို တိုးတိုးလေးရေရွတ်မိတယ်ဟု ဆိုပြီး နောက်တပုဒ်က ““ငါတို့ကလို့မပြီးမီ၊ မင်းနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်နေပြီဆိုတာ ကို ငါသိလိုက်တယ်””ဟုဆိုသည်။ ဤသီချင်းများကိုရေးသူများသည် ““အချစ်””ဟူသော စကားလုံးကို သုံး ထားသော်လည်း စစ်မှန်သောအချစ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။ သူတို့ပြောလိုသောအရာမှာ အရူး အမူးစွဲမက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကဗျာဆန်သောခံစားချက်များသည် လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း ဤသို့သော ခံစားချက်များသည် စစ်မှန်သောအချစ်မဟုတ်ပါ။
၆။ သင်သည် တစုံတဦးအပေါ်တွင် ပြင်းပြသောခံစားချက်များရှိပါက၊ သင်သည် ဤသို့သောခံစားချက် များသည် သင်၌အစဉ်အမြဲရှိနေမည်။
ခံစားချက်များသည် အတည်တကျမရှိပါ။ စိတ်ခံစားချက်များသည် မြင့်ရာမှနိမ့်ရာ၊ နိမ့်ရာမှမြင့်ရာ သို့ တက်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်နေသည်။ သင်၏စိတ်ခံစားချက် “မြင့်”နေသည့်အချိန်တွင် သင်ဟာ ကမ္ဘာကြီး ၏ ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက် နေသည်ဟု ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ အကြောင်းပြချက် ရေရေရာရာမရှိဘဲ၊ သင်၏ ခံစားချက် သည် “နိမ့်”နေမည်ဖြစ်သည်။ မကြာမီအချိန်တွင် သင်၏စိတ်ခံစားချက် ပြောင်းလဲပြီး အခြေအနေတို့သည် တဖန် ပြန် တောက်ပလာဖြစ်သည်။
စိတ်ကူးယဉ်ခံစားချက်များသည် တက်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်နေသည်။ ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့် မိန်းမ တစ်ဦးသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နက်ရှိုင်းစွာချစ်တာတောင်မှ အချစ်စိတ်သည် ပြောင်းလဲနေသည်။ တခါ တရံ သူတို့၏ အချစ်စိတ်သည် တဦးအပေါ်တဦး ပြင်းထန်နေတတ်ပြီး တခါတရံတွင်မူ ရှိပင်မရှိတက်ပေ။ သို့သော် ဤသို့သောစိတ်ခံစားချက်များသည် စစ်မှန်သောအချစ်အပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အချစ်စစ်သည် ခံစားချက်များအပေါ်၌ မူမတည်ဘဲ၊ တဦးအပေါ်တဦး ဆက်ကပ်အပ်နှံထားမှုအပေါ်တွင် အခြေတည်သည်။ ၇ကြိမ်တိတိလက်ထပ်ထားသော မင်းသမီးတဦးအား ဘာကြောင့် ၇ကြိမ်တိတိလက်ထပ် ခဲ့သနည်း? ဟုမေးခဲ့ရာ သူမက ““သင်ဟာအချစ်နွံထဲကျရောက်သွားနိုင်သလို၊ အချစ်နွံထဲက နေလည်း ပြန်ထွက်သွား နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အချစ်နွံထဲကနေ ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါ၊ ထိုသူနှင့် အတူ ဆက်နေပြီး မုန်းတီးစိတ်တွေ တိုးပွားလာတာထက်၊ ထိုသူနဲ့ မိတ်ဆွေတွေအဖြစ် ဆက်ရှိနေ နိုင်ဖို့အတွက် အခြားအသစ် တဦးကို ရှာတာက ပိုကောင်းပါတယ်””ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ စစ်မှန်သော အချစ်သည် ထိုကဲ့သို့ မပြုမူပါ။ အချစ်စစ်၌ သင်ဟာ အချစ်နွံထဲသို့ကျသွားလိုက်၊ ပြန်ထွက်သွားလိုက် မလုပ်ပါ။ အချစ်စစ်သည် တဘ၀ လုံးစာ ဆက်ကပ် အပ်နှံ ထားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၇။ ယောက်ျားတဦးကို YES ဟုပြောပြီး သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန် သဘောတူပါက၊ သူသည် သင့်အား သာ၍ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားလာလိမ့်မည်။
သင်သည် သူရဲ့လိင်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသည့်အတွက်၊ ယောက်ျားတဦးဟာ တခဏသာ သင့်အားချစ်ခင်တန်ဖိုးထားနေသည်ဟု ထင်ရသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် အချစ်စစ်မဟုတ်ဘဲ ကြာရှည် ခံမည် မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါစာသည် ဤအချက်ကို ဖော်ပြသည်။
““ကျွန်မဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်မထင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့ (၇)လကြာ ပုံမှန် တွဲနေ ခဲ့ တယ်။ ကျွန်မဟာ အမြဲတမ်း လျော်ကန်စွာ နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် အချိန် အတန်ကြာပြီးနောက်မှာ ကျွန်မတို့ဟာ နမ်းရှုပ်ရုံလောက်နဲ့ မကျေနပ်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်မရဲ့အချစ်ကို သက်သေပြပါလို့ သူကပြောလာပါတယ်။ နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ကျွန်မတို့ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထား မယ်ဆိုရင်၊ ဒီကိစ္စက အေးဆေးပါလို့ ကျွန်မတွေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ သူ့ရဲ့ဆန္ဒကို လိုက်လျော ခဲ့ပြီးနောက်၊ ဒီကိစ္စဟာ အလွန်အရေးပါတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်မအပေါ် ရိုသေလေးစားမှု မရှိတော့ဘဲ အခြားမိန်ကလေးတွေနဲ့ စတင်တွဲလာခဲ့တယ်။ ကျွန်မအကြောင်းကိုတောင် အခြားယောက်ျား တွေကို ပြောပြခဲ့တယ်။ ဤစာကိုမိန်းကလေးအားလုံးဖတ်နိုင်ဖို့ Print ထုတ်ပေးပါ။ ကျွန်မလိုမျိုး အချစ်ကို သက်သေပြ ဖို့ သွေးဆောင်ခံနေရတဲ့ တစုံတဦးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၈။ အကယ်၍သင်သည် တစုံတဦးနှင့် အပြန်အလှန်ချစ်ပြီး၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ပါက၊ တစုံတဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ မမှားယွင်းပါ။
လူငယ်များစွာတို့သည် ဤအတွေးအခေါ်ကို လက်ခံထားကြသော်လည်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀အပြင် ဘက်၌ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ မှားယွင်းသည်ဟု ဘုရားသခင်က ပြောထားသည်။ အမှန်မှာ လူတဦး ကျူး လွန်နိုင်သော ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်စေသော အပြစ်များထဲတွင် မတရားသော မေထုန်၌ မှီဝဲခြင်းဆိုသော အပြစ်လည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းစာက ဆိုသည်။ (၁ကော ၆း၉၊ ၁၈ တွင့်ကြည့်ပါ)
လိင်သည် ကောင်းမွန်သောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း လက်ထပ်ထားသည့် အိမ်ထောင်ရေး ဘ၀ အတွက်သာဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်က လိင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်းများကိုပေးထားခြင်းမှာ ဤလိင်ကိစ္စ ၌ ၀မ်းမမြောက် နိုင် ရန်အတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ ဤကိစ္စ၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အပြည့်အ၀၀မ်းမြောက်နိုင်ရန်ဖြစ် သည်။
၉။ သာယာပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုအတွက် ကောင်းကောင်းလိင်ဆက်ဆံနိုင်မှု ရှိရန်ကိုသာ လိုအပ်သည်။
သာယာပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်တခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် လိင်ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံနိုင်ရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ အပတ်စဉ်တိုင်းတွင် ၁၆၈ နာရီရှိသည်။ လက်ထပ်ထားသည့် စုံတွဲတတွဲ သည် ယေဘုယျအားဖြင့် တနေ့လျှင် မိနစ် ၃၀ သာ ဆက်ဆံရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက်သာ လက်ထပ်ပါက ပိုနေသည့်အချိန်များတွင် သင်ဘာလုပ်မည်နည်း? သင်သည် သာယာပျော်ရွှင်သော အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု ကို လိုချင်ပါက၊ လိင်အဖော်သက်သက်သာ မဟုတ် ဘဲ ဘ၀ဖော်ကိုရှာပါ။ လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်မှုသာမက သူငယ်ချင်း မေတ္တာရှိရန်လည်း လိုအပ်သည်။ သင်တို့ နှစ်ဦးသည် တဦကိုတဦး ချစ်ရုံမက၊ တဦးကိုတဦးနှစ်သက်ရန်နှင့် လေးစားမှု ရှိရန်လည်း လိုအပ်သည်။
၁၀။ အရူးအမူစွဲမက်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်သောအချစ်ကို ပိုင်းခြားသိမြင်ရန် လွယ်ကူပါသည်။
အရူးအမူစွဲမက်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်သောအချစ် နှစ်ခုကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် မလွယ်ကူပါ။ ဤနိုင်ငံအတွင်း ရှိ လူငယ် များစွာတို့သည် ဤ ““ထူးခြားကောင်းမွန်သော အချစ်ဒဏ္ဍရီတစ်ပုဒ်””ကို ယုံကြည်လျှက် ကြီးပြင်း လာကြသည်။ ပုံပြင်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ သူမဟာ အနည်းငယ်ရှက်တတ်တဲ့ကောင်မလေး တဦး ဖြစ်သော်လည်း၊ ချောမောလှပတဲ့ ကောင်မလေးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကြင်နာမှုရှိ၍ ချိုသာပြီး တကိုယ်ကောင်းမဆန်ပါ။ သူမဟာ အိမ်အနီအနားမှာပဲ အမြဲတစေနေထိုင်ပြီး အမေနဲ့အတူ အိမ်အလုပ်ကို ၀ိုင်းလုပ်၊ ချက်ပြုတ်ဖို့နဲ့ ချုပ်တတ်ဖို့သင်ယူကာ အမေ့စကားကို အမြဲနားထောင်ပါတယ်။
သူဟာ အရပ်ရှည်၊ ရုပ်ဖြောင့်ပြီး တောက်ပသောမျက်လုံးများရှိကာ၊ ကြယ်ပွင့်တဦးရဲ့ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည်မျိုး လည်း ရှိသည်။ မိန်းကလေးများစွာတို့က သူ့ကိုစွဲမက်ကြသော်လည်း၊ သူက သူတို့ကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ သူသည် သူ့အတွက် မှန်ကန်သောတဦးတည်းသော ထိုကောင်မလေးကိုသာ စောင့်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သူတို့ နှစ်ဦး တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တဦးကိုတဦး တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူး သော်လည်း မြင်မြင်ချင်း ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့သော စက္ကန့်လေးအတွင်း၌ပင်၊ တဦးအတွက် တဦး မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်ကို နားလည်သွားကြသည်။ အလွန်လျင်မြန်သော အချစ်ဇာတ်လမ်းပင်ဖြစ် သည်။ လူတိုင်းကသူတို့နှစ်ဦးဟာ အလွန်လိုက်ဖက်လှပတဲ့ စုံတွဲဖြစ်သည်ဟု ချီးကျူးကြသည်။ လေးပတ် အတွင်းတွင်၊ သူတို့သည် လက်ထပ်လိုက်ကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင် သွားကြလေ သတည်း။
ဤဇာတ်လမ်းသည် လှပသော ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ဤဇာတ်လမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ တခုခု မှားနေ သည်။ ဤပုံပြင်ဟာ အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါ။ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းဟာ စိတ်ကူးဖြင့် ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံပြင်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဤဇာတ်လမ်းမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ခဏခဏကြားနေပါ တယ်။ အထက်ပါပုံပြင်ရဲ့ နောက်ဆုံး စာကြောင်း ကို သတိထားမိပါသလား? ထိုစာကြောင်းမှာ သူတို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားလေသတည်း”” ဖြစ်သည်။ နတ်သမီးပုံပြင်များ၏ အဆုံးသတ်မှာ လည်း ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘ၀ဟာ နတ်သမီးပုံပြင်ကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ဘ၀၌ နေ့စဉ် နေထိုင်အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရန်၊ Bill များပေးချေရန်၊ အစားအသောက် ချက်ပြုတ်ရန်၊ အ၀တ်လျှော်ရန်၊ အနှီးလဲရန်၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသော ကလေးငယ်အတွက် တညလုံးနိုးနေရန်နှင့် အခြားကဗျာမဆန်သော အရာများကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သူ ကျွန်ုပ်အား သတိထားမိလာအောင် မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း?
Elisabeth Elliot အား လူအများမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းမှာ ““သူကျွန်မအား သတိထားမိလာအောင် ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမည်နည်း? ဟူ၍ဖြစ်သည်။ Elisabeth Elliot ပေးသောအကြံဥာဏ်ကို ဂရုတစိုက်မှတ်သား ထားပါ။ ကျွန်မရဲ့ အဖြေက ““ဘာမှမလုပ်ပါနှင့်။ ထိုသူနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာမှမလုပ်ပါနှင့်။ သူကို့ဖုန်းမခေါ် ပါနှင့်။ စိတ်ခံစားမှုကို ဖော်ပြသော ရုပ်ပုံလေး (သို့) ပန်းလေးတပွင့်ပါသည့် စာတိုလေးကို ရေးထားပြီး သင်၏လက်မှတ်ထိုးထားသောစာကို သူ၏စာတိုက်ပုံးတွင် သွား မထည့်ပါနှင့် ခန်းမအလယ်တွင် သူ၏အနားကပ်သွားပြီး ““ရှင်နဲ့စကားပြောကိုပြောရမယ်” ဟု စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် မပြောပါ နှင့်။ သနား စဖွယ်ပုံစုံမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။ သူ့ကိုလျစ်လျူလည်းမရှုပါနှင့်။ သူ့နောက် တကောက်ကောက် မလုပ်ပါနှင့်။ သူ့အား အခွင့်ထူးများမပေးပါနှင့်။ သင်လုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ထိုအရာမှာ ““ဤကိစ္စတစ်ခုလုံးကို ဘုရားသခင်လက်ထဲ သို့ အပ်လိုက်ပါ၊ အကယ်၍သူသည် သင့်အတွက် ဘုရားသခင် ကြံစည်ထား သူဖြစ် ပါက၊ ကျမ်းစာက ““ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်သောသူတို့အတွက် ကောင်းသောအရာကို ငြင်းတော်မမူ။ (ဆာ ၈၄း ၁၁) ဟု ဆိုထားသည်ကို သတိရပါ။
သင်၏အားအင်များကို နာခံရန်အတွက် အသုံးပြုပါ။ ထိုသူအား ဖမ်းရန်အတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်တို့နှစ်ဦးကို အတူတူရှိနေနိုင်စေရန် ဘုရားသခင်တွင် ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများရှိသည်။ သင့်ထံမှ မည်သည့်အကူအညီ၊ အကြံဥာဏ် ကိုမှမလိုပါ။
အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းသည် ကဗျာဆန်သောစိတ်ခံစားချက်များအပေါ်တွင် အခြေတည်သည်။
အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းသည် အလျင်အမြန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကောင်လေးတဦးသည် ကောင်မလေး တဦးအား စွဲမက်သွားသဖြင့် သူမအား နွေးထွေးစွာ ပြုံးပြလိမ့်မည်။ သူမကလည်း သူ၏ခံစားချက်ကို နားလည်ပြီး ပြန်လည် တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ အခြားသူတဦးအား စွဲမက်နေခြင်းက သင်၏စိတ်အားလှုပ်ရှားစေသည်။ မကြာမီအချိန်တွင် နှစ်ဦးစလုံးက ဤသို့ရေရွတ်လိမ့်မည် ““ငါဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ငါဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ရဘူး။ ဒါဟာအချစ်ဘဲဖြစ်ရမယ်။ နောက်ဆုံး မှာ ငါ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူ တဦးကို ငါရှာတွေ့ပြီ။
ထိုသို့သောလူမျိုးသည် အခြားသူတဦးနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ အချစ်နှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်နေ ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤခံစားမှုသည် ထူးခြားကောင်းမွန်သော ခံစားမှုဖြစ်သော်လည်း ထိုလူအတွင်း၌သာ ဤခံစားချက်သည် ရစ်နှောင်ထားလျက်ရှိသည်။ - ““ငါတစ်ခါမှ ဒီလိုမျိုးမခံစားခဲ့ရဘူး။ ... ငါသူနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်နေပြီ။ ... ငါ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သူ ကို ငါရှာတွေ့ပြီ။”” ဟူသော ခံစားချက်မျိုးဖြစ်သည်။ မိမိဟာ ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီဟု ထူးခြားကောင်းမွန်စွာ ခံစားရခြင်းဟာ အတည်တကျ အခြေအနေမဟုတ်ပါ။ တက်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်နေသော စိတ်ခံစားမှုများသာ ဖြစ်သည်။ သင်သည် ထူးခြားကောင်းမွန်သော စိတ်ခံစားမှုမျိုးဖြင့် တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ရှိနေနိုင်သော်လည်း၊ ထိုတောင်ထိပ်ပေါ်၌ အစဉ်အမြဲ နေနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါက၊ သင်ဟာ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ ကဗျာဆန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် အမြဲ တမ်းတည်တံ့နေမည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ခံစားမှုများသည် မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့၊ နိမ့်ရာမှမြင့်ရာသို့ စက်ဝိုင်းပုံစံ အတိုင်း တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်နေသည်။
လူနှစ်ဦးဟာ တဦးကိုတဦး အရူးအမူးစွဲလမ်းနေချိန်၌ သူတို့လုပ်မိနိုင်သော အမှားကြီး ၂-ခုရှိသည်။
၁။ သူတို့သည် လိင်ပိုင်းအရ ယှက်နွယ်သွားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စသည် ထိုစုံတွဲကိုသာမက သူတို့၏မိသားစုများကိုပါ ခေါင်းခဲစေနိုင်သည်။
၂။ သူတို့သည် အလျင်စလိုလက်ထပ်သွားမိနိုင်သည်။
သူတို့၏ ချစ်ကျွမ်းဝင်မှုဟာ စစ်မှန်သော အချစ်ဖြစ်ရဲ့လား (သို့မဟုတ်) အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်း တစ်ခုသာဖြစ်ပါက၊ သူတို့သည် လက်ထပ်လိုက်သောအခါ၊ မနက်ခင်းတခု၌ ထိုသို့သောကဗျာဆန် သော စိတ်ခံစားမှုများမရှိတော့ဘဲ သူတို့ဟာ နိုးထလာမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့သည် တဦးကိုတဦး မချစ် တော့ပါဟု ကောက်ချက်ချကြမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ အစကတည်းက သူတို့သည် တဦးကိုတဦး စစ်မှန်သောအချစ်ဖြင့် မချစ်ခဲ့ပါ။ အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည် စိတ်ခံစားချက် များ၏ အရူးလုပ်ခြင်းကို သူတို့ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောအချစ်သည် လှပသောစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုထက် ပိုပါသည်။
စစ်မှန်သောအချစ်ဟာ လှပသော စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ၊ သံဓိဌာန်ချထားမှုလည်းဖြစ်သည်။ သံဓိဌာန်ချခြင်းဆိုသည်မှာ သင်၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင် သံဓိဌာန် ချထားလား၊ မချထားလားဆိုတာကို သိနိုင်သည်။ ကျမ်းစာက ““ခင်ပွန်းများ၊ သင်တို့၏မယားများကို ချစ်ကြလော့””ဟု ဆိုသည်။ မိမိ၏ဇနီးအပေါ်တွင် ကဗျာဆန်သော စိတ်ခံစားချက် များထားရှိဖို့ အမိန့်မပေးထားဘဲ သူမအား ချစ်ရန်သာ အမိန့်ပေးထားသည်။
သင်သည် လက်ထပ်သောအခါ၊ သင်၏ဘ၀အဖော် တစ်သက်လုံးချစ်ရန် သံဓိဌာန်ချလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သင်သည် သင်သံဓိဌာန်ချထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုသည်ဖြစ်စေ။ မလုပ်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင် သံဓိဌာန် ချထားသည့် အတိုင်း ပြုမူလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချစ်စစ်၌ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် မိမိ၏ ခံစားချက်များနှင့်မဆိုင်ဘဲ၊ မိမိဇနီးကိုချစ်သည်။ သူမဟာ ထိုအချိန်၌ ချစ်စရာကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ် သည်ဖြစ်စေ သူမအားချစ်သည်။ ဇနီးဘက်မှ ကြည့်လျှင်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
ကဗျာဆန်သော စိတ်ခံစားချက်များမရှိဘဲ၊ သူတို့သည် မနက်ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ သူတို့သည် ကွာရှင်းရန် တရားရုံးသို့သွားမည်မဟုတ်ပါ။ တဦးအပေါ်တဦးထားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ သူတို့ဟာ လုံခြုံစိတ်ချစွာနေနိုင်ပြီး ကဗျာဆန်သော စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ရှိ၊ မရှိကို သူတို့ ဂရုမစိုက်ပါ။ အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအရာမှာ ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးသည် တဦးအပေါ်တဦး သစ္စာရှိစွာဖြင့် မိမိတို့ သံဓိဌာန်ချထားသည့်အတိုင်း ချစ်ပါက၊ ကဗျာဆန်သော အချစ်စိတ်များသည် မပျောက်ကွယ်သွားပါ။ သင့် အလိုဆန္ဒ၏ ရွေးချယ်မှုနောက်သို့ သင်၏စိတ်ခံစားမှုများသည် လိုက်လာ လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏သံဓိဌာန်ကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ၊ မိမိ၏လုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် မိမိ၏သံဓိဌာန် ကို ခိုင်မာစေရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏ ““ချစ်ကျွမ်းဝင်မှု””ဟာ စစ်မှန်သောအချစ်လား (သို့) အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်သလားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အချိန်ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းများသည် အလျင်အမြန် အစပြုပြီး သူတို့၏ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး၌ အတက်၊ အကျများစွာရှိသည်။ ဤသို့သောစွဲမက်ခြင်းဟာ rollercoaster စီးနေရသည်နှင့်တူပြီး စီးနေချိန် ၌ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ မကြာမီ အချိန်တွင် အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်၌ စစ်မှန်သောအချစ်မှာမူ နှေးကွေးစွာစတင်သည်။ အစပိုင်းတွင် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆက်ဆံရေးမျိုးပင်ဖြစ်ပြီး ထိုမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြီးထွား လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကဗျာဆန်သော အချစ်စိတ်များလည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ သင်တို့၏နှလုံးသားများ ဟာ အတူတကွ ကြီးထွားလာသည်ကို သင်နားလည်လာလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သောအချစ်သည် အချိန်ကြာ လာသည်နှင့်အမျှ ကြီးထွားလာသော်လည်း အရူးအမူး စွဲမက်ခြင်းမှာမူ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွား လိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ သင်၏ ““ချစ်ကျွမ်းဝင်မှု”” ဟာ စစ်မှန်သောအချစ်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို အချိန် က အကောင်းဆုံး အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်။
တဦးဦးနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်မှုရှိရန် မျှော်လင့်ထားပါ။ ...ပြီးတော့စိတ်ရှည်ပါ။
လူတိုင်းဟာ အနှေးနှင့်အမြန် တဦးဦးနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားပေမည်။ အကယ်၍ သင်၏အချစ်သည် သင့်ထံ မရောက် လာ သေးပါက စိတ်ရှည်ပါ။ သင့်အားလက်ထပ်ရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါက သင် စောင့်နေသော အချိန်သည် ရောက်လာလိမ့်မည်။ ပြင်းပြသော အချစ်စိတ်များသည် သင့်အား အမှားကြီး နှစ်ခုကို လုပ်စေနိုင်သည်ကို သတိရပါ။ (၁) သင့်အား လိင်ကိစ္စ၌ ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းဖြင့် သင်၏ဘ၀ကို ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ပြီး သာယာ ပျော်ရွှင် သော အိမ်ထောင်ရေးကို ရနိုင်မည့် သင်၏အခွင့်အလမ်းများ ကို များစွာလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ (၂) ဤ ပြင်းပြ သော အချစ်စိတ်များသည် သင့်တ၀ဘလုံးနောင်တရနေမည့် စောလွန်းပြီး မရင့်ကျက်သေးသည့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းမျိုးကို ပြုစေ နိုင်သည်။
အထက်ပါအမှားကြီး ၂-ခုကို မလုပ်ပါနှင့်။ သင်၏ပြင်းပြသောအချစ်စိတ်ကို စောင့်ထိန်းပါ။ မှန်သောလူ၊ မှန်သောအခြေအနေနှင့် မှန်သောအချိန်ကိုစောင့်ပါ။
၁၇ နှစ်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိ - လွယ်ကူစွာမဖြေရှင်းနိုင်
by Penny Mathewson
သင်သည် တစုံတဦးကို တနှစ်ပတ်လုး ရင်းနှီးခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်းကျတော့ သင်ဟာ ထိုသူ တို့ကို မသိကျွမ်းခြင်းဟာ ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား? ကျွန်မရဲ့ ကောင်လေးကို ကြည့်နေတုံးမှာ၊ ထိုမေးခွန်းကို မိမိ ကိုယ်ကို မေးကြည့် မိတယ်။ သူဟာ ကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်နေပြီး သူမျက်နှာပေါ်မှာ စိတ်ခံစားမှုတစုံတရာ မရှိပါဘူး။ ““နင် ငါ့ကို ဘာကြောင့် တစိမ်းတယောက်လို ကြည့်တာလဲ”” ““နင်ငါ့ကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး”” ““ငါရင် ကျိုးမှာ နင် ဂရုမစိုက် ဘူး လား”” ဟု ကျွန်မငိုယိုကာ မေးလိုက်သည်။ သူဟာ ကျွန်မကို အတန်ကြာ ငေးကြည့်နေပြီးနောက် ““ငါဘာကိုမှ မခံစားရ တော့ဘူးလို့ ငါထင်တယ်””ဟု သူက တိုးတိုးလေးပြန်ဖြေသည်။
ကျွန်မဟာ နောက်ထပ်မေးခွန်းတခွန်ကို ထပ်မေးလိုက်ပါတယ်။ အဖြေကိုတော့ ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖြေကို သူ့ပါးစပ်မှ ပြောတာကြားချင်ကြားရမယ်။ မကြားရ ရင်ကျွန်မဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ အိပ်မက်ကို တသက်လုံးမက်ပြီး အသက်ရှင်ရပါမယ်။ မေးခွန်းကတော့ ““ရှင်ကျွန်မကို ချစ်သေးလား? သူဟာ ကျွန်မကို တချက်ကြည့်ပြီး ““မချစ်တော့ဘူး””ဟု ပြောပြီးနောက် တံခါအပြင်ဘက်သို့ ထွက်သွားပြီး ကျွန်မရဲ့ ဘ၀တွင်းမှလည်း ထွက်သွားပါတယ်။ ကျွန်မဟာ နာကျင်မှုဖြင့် တကိုယ်လုံး ထုံထိုင်းသွားပြီး တံခါးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အရာ အားလုံးကို ပေးခဲ့တဲ့ ယောက်ျားဟာ ကျွန်မကို ကိုယ်ဝန်တစ်ခုနဲ့ တစ်ဦးတည်းထားခဲ့ပါပြီ။
နောက်ပိုင်းမှာ အချိန်တွေဟာ နှေးကွေးစွာ ကုန်နေပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခံရမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နာကျင်မှု၊ အမျက်ဒေါသနှင့် ခါးသီးမှုတွေကို ကျွန်မဟာ နေ့တိုင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မကို နွေးထွေးစွာ ပြုံးပြခဲ့တဲ့သူရဲ့ အပြုံး တွေ ဟာ ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကို ထွင်းဖောက်ခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ ရယ်မောခြင်းတွေ၊ ကျွန်မကို ထာဝရချစ်ပါ့မယ်လို့ သူပေးခဲ့တဲ့ ကတိတွေဟာ ကျွန်မနှလုံးသားရဲ့အောက်ခြေမှာ တစစီကွဲကြေလျက် တည်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးဟာ ကြေကွဲဖွယ်အဆုံးသတ်ခဲ့သလို ကျွန်မ ကိုလည်း ကြေကွဲစေပါတယ်။ နောက်လာမယ့် လ၊ နှစ်တွေကို မျှော်ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်မဘ၀ဟာ ကြောက် ရွံ့ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းများနှင့် ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
““အိုး၊ ဘုရားသခင်”” ““ကျွန်မဘာဆက်လုပ်ရမလဲ”” ဟုအော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်မှာ မိခင်တဦးဖြစ်လာပြီး ကလေးတဦးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ကျွန်မကို ကြောက်ရွံ့စေခဲ့ ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်တွင်း၌ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်တည်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကလေး,လေးကို အခြားသူ တွေ မွေးစားဖို့အတွက် ပေးလိုက်ရမှာကို တွေးတောင်မတွေးရဲခဲ့ပါဘူး။ ““လွယ်ကူတဲ့ဖြေရှင်းနည်းကို သုံးဖို့ ပြောနေတဲ့အသံများစွာကို ကြားခဲ့ရ ပေမယ့်၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ ကျွန်မကလေးရဲ့ သေခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အိပ်မက် တခုသေဆုံးသွားတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်မကလေးရဲ့ သေခြင်းကို ကျွန်မ မကြည့်ရက်ခဲ့ပါဘူး။ ပျောက်ဆုံး သွား တဲ့ အချစ်ကနေဖြစ်တည်လာတဲ့ ဘ၀တစ်ခုဟာ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်အတွင်းမှာ ရှိနေတာဟာ မခံစား နိုင်စရာ ပါဘဲ။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ ဖိအားတွေ ဟာ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ၀င်လာပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေဟာ ကျွန်မကိုယ်စား ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်မကို ကြောက်ရွံ့မှု၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျွန်မဟာ ဒီအိမ်မက်ဆိုးကို ““အမြန်”” အဆုံးသတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဒါတွေအားလုံးဟာ ပြီးဆုံး သွားမှာပဲလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ပါ။ ဤကိစ္စအား ““အမြန်””နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းလိုက်ပါက၊ ဒီကိစ္စတခုလုံးကို မေ့ပစ်လိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘ၀အသစ် တခု စတင်နိုင်မယ်၊ အကယ်၍ ဒီကိုယ်ဝန်ကို မွေးဖို့ဆုံဖြတ်ပါက၊ ဒီကိစ္စဟာ ပြီးပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်မဟာ ကလေး တယောက်နှင့် လုံးချာလိုက်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့မယ် (မဟုတ်ရင်) အခြားသူတဦးကို “အမေ”လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကလေး အကြောင်းကိုလည်း တွေးနေရမယ်။ ““အိုး၊ ဘုရားသခင်”” ““ကျွန်မဘာဆက်လုပ်ရမလဲ””။
ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးနေစဉ်အတွင်း၌ပင် ကျွန်မဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ကျွန်မရင်ဆိုင်ရမှာကိုပါ သိထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆဲ ကာလတွေမှာ၊ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ ကလေးကို စွန်လွှတ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘဲ၊ ဘ၀မှာ သူရနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းကိုရအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ကလေးမှာ အဖေနဲ့အမေရှိစေလိုတာကြောင့်၊ အခြားစုံတွဲကို ပေးမွေးစားဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားအတွင်း မှာတော့ သူ့ကို ကျွန်မရဲ့ကလေးအနေနဲ့ပဲ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက် လိုပေ မယ့် ကျွန်မနှလုံးသားရဲ့ ပို၍နက် ရှိုင်းတဲ့နေရာမှာ သူ့ကိုအကောင်းဆုံးကိုသာ ရစေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိနေခဲ့တယ်။ အချစ်ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို စွန့်လွှတ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မနားလည်လာခဲ့တယ်။
Michael မမွေးဖွားမီ ၂ပတ်ခန့်အလိုမှာ ကျွန်မဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခရစ်ယာန်မောင်နှံနဲ့ အဆက် အသွယ် လုပ်ခဲ့ ပါ တယ်။ ကျွန်မတို့ကို ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေများက မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပြီး ကျွန်မဟာ Michael ရဲ့ အဖေနဲ့အမေကို တွေ့သွားပြီဆိုတာကို ကျွန်မစိတ်နှလုံးထဲမှာ သိနေခဲ့ပါတယ်။ အစမှာ သူရှိနေ မယ့်နေရာကို ကျွန်မ သိရတာနှင့် ပတ်သက် ပြီး အနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်မကြားဖူးတာကတော့ မိမိရဲ့ကလေးကို မသိ၊ မမြင်ရဘဲ နေတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကို မေ့ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ကျွန်မကိုယုံကြည်စေခြင်းအားဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ကျွန်မကို အရင်ဆုံး လိမ်ညာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ နှလုံးသား ထဲက အသံတိုးတိုးလေးကိုပဲ ကျွန်မနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစုံတွဲ Michael ကို မွေးစားမယ့်အကြောင်းကို ကျွန်မ တွေးတဲ့အခါ၊ ကျွန်မဟာ ပျော်ရွှင်စိတ်ချတာကြောင့်၊ တရားဝင်မွေးစားနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ဆက်လုပ် ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဆေးရုံကနေဆင်းရမယ့်ရက်ရောက်လာပါတယ်။ ထိုစုံတွဲဟာ ကျွန်မကို လာကြိုပြီး အဲဒီကနေ ရှေနေရဲ့ ရုံးခန်းကိုသွားပြီး ဆေးရုံးဆင်းလက်မှတ်နှင့် မွေးစားစာရွက်စာတမ်းတွေမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် လေးနှစ်နီးပါး ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကျွန်မရဲ့အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အနာငြိမ်းစေတဲ့ မေတ္တာကိုလည်း နားလည်ခဲ့ပြီး ဘ၀တစ်ခု စီတိုင်းမှာ ဘုရားသခင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း နားလည်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို နောင်တမရပါဘူး။ အခုဆိုရင် Michael မှာအသက်၊ အချစ်နဲ့ ထိုအရာတွေကို ဝေမျှခံစားမယ့် မိသားစု တစ်ခုရှိနေပါပြီ။
၁။ မိန်းကလေးတဦးသည် ချိန်းတွေ့သော ညနေခင်းလေးတစ်ခု၌ ၀မ်းမြောက်ပြီး၊ သူမရဲ့ကျေးဇူးတင်မှု ကိုဖော် ပြလိုပါက၊ ဤသို့ရိုးရှင်းစွာပြောနိုင်သည်။ ““ကျေးဇူးပါပဲ၊ ကျွန်မအရမ်းပျော်ခဲ့ရပါတယ်။””
၂။ ပွတ်သပ် နမ်းရှုပ်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ လိင်ပိုင်းအရ သင့်တို့ကို များစွာလှုံ့ ဆော်ပေးနိုင်ပြီး လုပ်ရန်မရည်ရွယ်ထားသော အရာများကို လုပ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၃။ ပြသနာတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ရမည့်အချိန်မှာ ပြသနာပေါ်ပေါက်လာသောအချိန်တွင်သာ ဖြစ်သည်။
၄။ ခရစ်ယာန်လူငယ်များတွင် အခြားသူများကဲ့သို့ ပြင်းပြသောလိင်ဆန္ဒရှိပြီး အခြားသူများကဲ့သို့ သွေးဆောင်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ မြင်မြင်ချင်းအချစ်သည် အများအားဖြင့် စစ်မှန်သောအချစ်ဖြစ်သည်။
၆။ ယောက်ျားတဦးအား YES ဟုပြောပြီး သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန် သဘောတူပါက၊ သူသည် သင့်အား သာ၍ ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားလာလိမ့်မည်။
၇။ ကျမ်းစာက မတရားသောမေထုန်မှီဝဲခြင်းသည် လူတဦးကျူးလွန်နိုင်သော ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ် စေသော အပြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။
၈။ အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းသည် ကဗျာဆန်သောစိတ်ခံစားချက်များအပေါ်တွင်သာ အခြေတည်ပြီး ဤသို့ စိတ်ခံစားမှုများ သည် အတည်တကျ ဖြစ်တည်နေမည်မဟုတ်ပါ။ ဤခံစားချက်များသည် တက်လိုက်၊ ကျ လိုက်ဖြစ်နေပြီး အရူးအမူး စွဲမက်ခြင်းသည် ကြာရှည်မခံပါ။
၉။ လူများသည် အရူးအမူးစွဲမက်နေချိန်၌ သူတို့လုပ်မိနိုင်သောအမှားကြီးနှစ်ခုရှိသည်။ (၁) သူတို့ သည် လိင်ပိုင်းအရ ပါဝင်ပတ်သက်သွားနိုင်သည်။ (၂)အလျင်စလိုလက်ထပ်မိသွားနိုင်သည်။
၁၀။ သင်၏““ချစ်ကျွမ်းဝင်မှု””ဟာ စစ်မှန်သောအချစ်လား(သို့) အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းတစ်ခုလားဆိုတာကို သိနိုင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်မည့်အရာမှာ အချိန်သာဖြစ်သည်။ အချစ်စစ်သည် အချိန်ကြာလာ သည်နှင့်အမျှ ကြီးထွားလာသော်လည်း၊ အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းမှာမူ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွား လိမ့်မည်။